Wafdi ka socda dalka sudan oo soo gaaray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda dalka sudan oo soo gaaray Muqdisho
Ardaan Yare 27 August 2018
Wafdi uu hogaaminayo Agaasimaha guud ee sirdoonka iyo nabadsugida Sudan (NISS) Gen. Salah Abdalla Mohamed Saleh ayaa maanta waxa ay soo gaareen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya,iyadoona si weyn loo soo dhaweeyay.
Waxaa Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ugu hortagay wafdiga oo ku soo dhaweeyay Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Dowlada Federalaka Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Agaasimaha guud ee Hay’adda Nabadsugida iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen.
Wafdigan uu hogaaminayo Agaasimaha guud ee sirdoonka iyo nabadsugida Sudan (NISS) Gen. Salah Abdalla Mohamed Saleh ayaa magaalada muqdidho ku yimid booqasho rasmi ah,waxaana la socdo wafdiga sida aan wararka ku heleyno madax ka socota dalka Qatar.
Sidoo kale waxaa lagu wadaan in wafdigan ka socda dalka sudan ee maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan Madaxda ugu sareeysa Hay’adda NISA ee Soomaaliya.
Qarax gaari oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Kheyre oo la kulmay Safiirka Uk u qaabilsan Somalia